नेपाल आज | दुलहा–दुलहीका कारण बुवाआमा परे प्रहरीकाे फन्दामा, डेढ देखि तीन वर्ष कैद!
दुलहा–दुलहीका कारण बुवाआमा परे प्रहरीकाे फन्दामा, डेढ देखि तीन वर्ष कैद!
शुक्रबार, १७ असोज २०७६ गते प्रकाशित - नेपाल आज
सल्यान - सल्यानमा दुलहा–दुलहीसहित ७ जना मण्डपबाटै पक्राउ परेका छन्। सिद्धकुमाख गाउँपालिकामा बालविवाह गर्ने गराउने सातजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले गोप्य सूचनाको आधारमा दुलहा–दुलही र उनीहरुका बुवाआमासहित विवाह गराउने पण्डितलाई समेत पक्राउ गरेको हो ।
पक्राउ पर्नेहरुमा १९ वर्षीय दुलाहा र उनका बुवा लोकबहादुर बोहरा, आमा माया बोहरा, सिद्धकुमाख गाउँपालिका २ की १९ वर्षीया दुलही, बुवा रत्नबहादुर रावत, आमा कलौटी रावत र जाजरकोट कुसे गाउँपालिका ९ घर भई हाल सल्यानको सिद्धकुमाख गाउँपालिका ४ चाँदेकरेन्जी बस्ने पण्डित नविन आचार्य छन् ।
प्रहरी नायब उपरीक्षक ढकेन्द्र खतिवडाले उनीहरुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको बताए । उनका अनुसार पहिला भागेर गएका उनीहरुलाई दुलहाका बाबुले घरमा भित्र्याउँदै गर्दा प्रहरीले पक्राउ गरेका हो।
दुलहा र दुलही तुलसिपुरस्थित एक विद्यालयमा अध्ययनरत थिए । कानुनमा बालविवाह गर्ने गराउनेलाई न्यूनतम् डेढ वर्षदेखि तीन वर्ष कैद र ३० हजार देखि १५ हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । दुई वर्षको अवधीमा पाँच बालबिबाह रोकिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले जनाएको छ ।